Anapa - idolobha lapho isithandwa izivakashi kusukela ezinsukwini zeSoviet Union. It kwaku zokungcebeleka engcono kanye nokungcebeleka izikhungo. Idolobha lesimanje lase-Krasnodar esifundeni umthangalasisekelo athuthukile, ulwandle, ilanga nomoya ekwelapheni. izivakashi yanamuhla bayakujabulela ukuza lapha hhayi kuphela ngamaholide ngasolwandle minyaka yonke, kodwa futhi ukuba sikujabulele ngokugcwele nezindawo ezinhle. Kwabaningi, nawu umbuzo njengoba emotweni ukuze uthole Anapa. Kulesi sihloko, sizofunda ayasabela.
Ukuthuthukiswa omuzi aqala ngomzuzu lapho Anapa baba yingxenye Russia. Engaziwa ngaphambi leli dolobha lakhula ngokushesha kangaka ukuthi ngokushesha ayebizwa ngesiqu esithi eziqhenyayo ngobukhulu ethekwini edolobheni. Kutfutfukiswa echwebeni kwaholela ukugeleza izivakashi, waqala ukuthuthukiswa Anapa zokungcebeleka endaweni kahle.
Ukudalelwa owakhipha umyalo wokuba umuzi eseke yindawo enhle kumephu. Senzeka ngaleso sikhathi Phambanisa yonke iNhlonhlo Taman Omkhulu eCaucasus. inhlanganisela nenhle of emathafeni endaweni Kuban nge kweBlack Sea ezintabeni eqinile. Anapa uyakwazi ukunikeza izivakashi ezahlukene Amazing omkhulu wokudlulisa imizwelo. A ecacile entabeni kolwandle emoyeni ngiyoba nethonya elihle ku-impilo umzimba. Ngakho ukhululeke ukuya ngemoto Anapa.
izindikimba Hlukanisa ukhishwa Amazing emabhishi Anapa. Phela, umuntu lapho eRussia ungathola indawo lapho okwamanje kuyinto wangaphambili emfuleni amabhishi. Ngasekuqaleni oLwandle Olumnyama agelezela emfuleni Kuban, kodwa isiqondiso salo zashintsha njengoba isikhathi siqhubeka, futhi ichibi yomile. Kusukela manje endaweni yayo kuhlobisa amabhishi omangalisayo sandy nge ngobumnene ezitshekile yokungena olwandle. Luhle imindeni enezingane, lapha emhlabeni isihlabathi futhi kuqhathaniswa engajulile. Kuvele obuphelele umxhwele ugu ikuvumela ukuba uzizwe ukhululekile ngisho ngesikhathi okusezingeni eliphezulu izivakashi isizini. It uhlala ukubhekana indlela imoto ukuze uthole Anapa.
Indawo ekahle edolobheni ivumela ngokushesha, kahle futhi ngemali ephansi uthole lapha kusuka kuphi eRussia. Lokhu resort kungaba okunye okukhulu uhambo phesheya. Awunayo ukukhokhela i indiza ezibizayo noma kuvulwa i-visa, kodwa kuyokusiza ugcine ingxenye enkulu ibhajethi yakho. Izinketho awela Anapa eziningana. Ukukhetha indlela esheshayo futhi ukhululekile kakhulu kuncike kuphela lapho ezweni lapho ukhona. Ungasebenzisa lezi zinhlobo ezilandelayo yezokuthutha:
Kusukela enhloko-dolobha ukuze resort - 1475 amakhilomitha, umzila ngqo ngemoto Anapa, sizokwenza manje cabanga.
Yiqiniso, indiza kuyoba esheshayo, kodwa futhi kancane ezibizayo. Ukusebenzisa izinsizakalo ujantshi ezokuthutha, ungagcina mayelana 30% intengo ithikithi. Ukukhuluma wenduduzo, Kungcono ukuqeqesha, kodwa ngeke kuthathe isikhathi esithe xaxa kunanoma iyiphi enye indlela ezokuthutha.
Siya ngemoto Anapa
Futhi manje kabanzi mayelana kanjani lapho ngemoto Anapa. Kungcono ukuya kusihlwa ubusuku drive ngaphandle isiminyaminya. Okokuqala, udinga ukuya endleleni M-4-Don eMoscow. Kusukela Rostov ukujikisa bebheke Krasnodar esifundeni.
Ngokusebenzisa nemizana Kanev naseLeningrad siphela indlela emfushane. Kuyadingeka ukuba uhambe endleleni R-268 futhi besiya Timashevsk. Jikela ngakwesokudla emgwaqweni eziyoholela Slavyansk-na-Kubani. Ngokulandelayo, uzothola imijondolo efana: Anastasievsko, Korzhevsky, Varenikovskaya futhi Anapa. Kanjani lapho ngemoto futhi ugweme isiminyaminya, manje uyazi.
Ahlungwe ngokubanzi base ehhotela Anapa kalula anelise izifiso izivakashi njengoba kwenza isigaba ibhizinisi nalabo abanomthwalo etheni. It unikeza ethulwa okunethezeka VIP-ehhotela nge uhla oluphelele amasevisi, kuhlanganise spa.
Ukuze nesizotha more, Omunye angase athi, ekhaya ukuzijabulisa bendawo ukunikela uqashe le amafulethi amakamelo e isivakashi izindlu noma Cottages.
Noma yimuphi umhlali Krasnodar Territory uzokutshela kanjani lapho ngemoto Anapa. Ngaphambi kwalokho, edolobheni laseMoscow kuyodingeka ukuhamba 1475 amakhilomitha.
Fun, ngokuba eholidini
Njenganoma yimuphi resort Ogwini lolwandle of Anapa linikeza izivakashi zayo ezihlukahlukene imisebenzi amanzi. Nokho, muva nje, siwulalela lo mkhuba ukuthi abantu abaningi banesithakazelo kwamasiko futhi izikhumbuzo zomlando we edolobheni.
Kufanele nakanjani wenze isikhathi futhi niqhubeke indawo, futhi sakujabulela sesigodi Abrau-Durso. Ngaphezu kwalokho, kukodwa ngempela olunothile, ne landscape elihle endaweni, kunesinye ayinto engaqondakali. I Winery owaziwa isebenza lapha kusukela ekuqaleni kwekhulu XIX futhi uyakuthokozela izivakashi nge imikhiqizo yayo. The umphelelisi ephelele kungaba ogibele ihhashi noma safari.
Kakhulu ukukhetha okuhle lokhu resort njengoba iholidi lomkhaya. Lena ulwandle hhayi kuphela emanzini angajulile, okuyinto ethandwa kakhulu phakathi kwemindeni nezingane, kodwa futhi nezinye izinto eziningi ezikhangayo. Ingane yakho nakanjani ukujabulela evakashele Aquarium komuzi, ngoba lapha ungakwazi simazi nabakhileyo ekujuleni kolwandle eduze ngokushesha. Futhi-ke, evakashele Dolphinarium kuzokwenza kwangijabulisa kakhulu. Dolphins bengayi kuphela zibabaza, kodwa futhi nabo letingabhukusha.
Ungakhohlwa edolobheni kanye nentsha. Yasebusuku lapha iyakhiwa ezingeni eliphezulu kakhulu. Uma izinhlelo zakho zihlanganisa iholidi fun ogwini, Anapa kuyokushiya umangele.
Ubuhle ngasolwandle iholide, elikwaziyo ngiyakuwunikela lo muzi bazosala inkumbulo yakho iminyaka eminingi ezayo njengoba uhambo egqamile futhi kujabulise. Manje uyazi mayelana nomunye yokungcebeleka enhle we Krasnodar esifundeni, kanye kanjani lapho ngemoto kusuka eMoscow kuya Anapa.